Nolosha Qoyska Iyo Kalgacalka! - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA Nolosha Qoyska Iyo Kalgacalka!
Dhacdooyinka yaabka leh ee ku jira diiwaanka TV-GA Alan ee Dubai gaar ahaan barnaamijka Qaraa’ib (Arrimaha yaabka leh ) waxa ka mid ah qisadan:
Islaan maalqabeen ahayd oo 85 jir ah una dhalatay dalka Usteriya ay jeexjeexday lacag dhan hal malyuun oo lacagta Yuruda ah oo ay iyadu lahayd.
Islaantan ayaa lacagtaasi kififtay ka hor intii aanay ku dhiman xarun dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo lagu hayay. Islaanta ayaa la sheegay inay diidanayd in lacagtaasi ay ka dhaxlaan caruurteeda iyo kuwa ay sii dhaleen.
Xeer ilaaliyuhu wuxu intaasi ku daray isagoo u waramayay wakaalada wararka Farasniiska in arinkan aan laga dhigi doonin fal denbiyeed sidaas darteedna aan loo furayn fayl, madaama lacagta kaydkeeda ah ay iyadu lahayd isla markaana ay xor u ahayd waxa ay ku qabanayso.
Dadka degan xarunta islaanta lagu hayay ayaa ka soo saaray maydkeed makhsinkii ay deganayd iyadoo ay dhinaceeda yaallaan lacagtaasi ay jarjartay iyo weliba jeegagii iyo cadaymihii kale ee Baanka oo iyana ay dhamaantood googoysay sida laga soo xigtay wargeyska Corer.
Laakiin dhaxlayaasha ayaa la sheegay inay weli fursad u haystaan inay helaan lacagtaasi sida maamulayaasha baanka Austeria laga soo xigtay haddii aanay ahayn mid faalso ah. Ku xigeenka Baanka ayaa isna Wareyska u sheegay in haddii dhaxlayaashu ay keenaan waraaqihii googay dhamaantood oo ay sax noqdaan ay xaq u leeyihiin in baanku u bedelo
Previous articleSaraakiisha Laanta Socdaalka Ee Gobolka Togdheer Oo Ka Waribixyay Hawlgallada Ajaanibka Lagu Baadhayo
Next articleMadaxweynaha Somailand oo Kulan la Qaatay Madax ka socota Hayadda Qaxoontiga Adduunta ee UNHCR.